Sidee si ay u xaliyaan marka iPod ma hagaagsan doonaa files leh Lugood? ma iPod la aqoonsan yahay
Markii aan surin aan iPod in aan computer waxa aanu mar dambe ma hagaagsan oo anigu ma ku dari kartaa ama tirtirto songs dambe sababtoo ah waa sida haddii iPod aan la aqoonsan Lugood. Waxaa weli aan soo eedeeyo iPod laakiin waxaan doonayaa in aad ku darto heeso cusub oo iPod, laakiin ma sababtoo ah ma u hagaagsan doonaa karaa!
Waxyaabaha tagaan faraha, iyo iPod ma hagaagsan doonaa Lugood? Waa arrin niyad-jab, gaar ahaan marka Lugood waa kan keliya oo aad u hagaagsan files si aad iPod leh. Ha welwelin. Mararka qaarkood Lugood dhaqmo sidan oo kale, laakiin waxaad isku dayi kartaa inaan ku saxno. In this article waxaa ku qoran talooyin qaar ka mid ah, oo aan rajeynayaa in ay idiin samayn doono.
1-dii hab: Hubi Lugood version iyo cable USB ku
2aad Habka: ogolaato Lugood iyo computer
Habka 3aad: Guuleysatey computer ama reboot aad iPod
hab 4-aad: Dib u celi oo soo celin iPod aad
hab 5aad: nidaameed Lugood leh iPod via WiFi
habka 6aad: nidaameed iPod oo leh qalab xisbiga saddexaad
Habka 1aad: Hubi version Lugood iyo cable USB
Hagaaji Lugood in mid cusub
Waxa ugu horeeya ee aad samayn karto marka iPod ma hagaagsan doonaa in Lugood yahay si loo hubiyo version Lugood ugu on your computer. Haddii ay jiraan version a cusub la heli karo, waxaa idinku waajib ah in la gaarsiiyo Lugood in mid cusub.
Beddel cable USB ah
Hubi USB ah cable iPod ay u deeruhu off oo mar kale furaysto ee kombiyuutarka. Marka ay weli ma shaqeeyaan, waxaad bedeli kartaa cable USB kale oo ay isku day ah. Mararka qaarkood, waxa ay ka shaqeyn doonaan.
Habka 2aad: ogolaato Lugood iyo computer
Haddii Lugood ma hagaagsan doonaa iPod, waa lagama maarmaan si loo hubiyo in aad computer waxa la oggol yahay, gaar ahaan marka aad ku xidhi aad iPod on computer cusub. Lugood Open. Riix Store si ay u muujiyaan in ay menu jiido hoos. Riix fasaxayaa Tani Computer ... iyo talooyin ID Apple aad. Hadii aad waligaa idman kombiyuutarka, in aad marka hore deauthorize karo computer iyo fasaxayaa markii labaad.
Marka aad ka eegtay labada hababka ugu horeysay, laakiin iPod ma hagaagsan doonaa Lugood, waxaad isku dayi kartaa habkan.
Waa wax la dhibsado guuleysatey computer ka, laakiin waa in aad dareentid in mararka qaarkood howleheedii kombiyuutarka hagaajin doonaa dhibaatada ka heli Lugood in ay ka shaqeeyaan.
Reboot iPod ah
Haddii aad dareentid in aad iPod aan si sax ah ugu dhaqmayaan, waxaad noqon karaa mar kale reboot. Marka iPod way rogmatay, oo waxaad isku dayi kartaa in ay hagaagsan oo Lugood.
Habka 4-aad: Dib u celi oo soo celiyo aad iPod
Weli wax dhib ah oo ku saabsan iPod ma syncing la Lugood? Isku day inaad dib u iPod oo ka dib loo soo celiyo. Ka hor inta resetting, waa in aad raad raac aad iPod in iCloud ama Lugood. Markaas, aad iPod, tuubada Goobta > General > celi > masixi All Content iyo Settings . Markaas, soo celinta aad iPod la faylka gurmad. Ugu dambeyntii, hubi in Lugood u hagaagsan kartaa iPod ama aan.
Sida caadiga ah isticmaalaan cable USB? Isku day inaad la isticmaalayo nidaamka WiFi hadda. In aad iPod kooban wada hadal ku Lugood ee kombiyuutarka, sax nidaameed la iPod taliya WiFi . Markaas, aad iPod, tuubada Goobta > General > Lugood Wi-Fi nidaameed > nidaameed hadda .
6-deedii hab: nidaameed iPod leh qalab xisbiga saddexaad
Haddii aadan u hagaagsan karaa iPod in Lugood ka dib markii isku day hababka kor ama aad rabto in aad leedahay hab sahlan si hagaagsan iPod, waxa kale oo aad isticmaali kartaa qalab xisbiga saddexaad. Waxaa jira mid u shaqeeya sida Lugood iyo sameyn kara waxa Lugood ma sheegi karo. Waxa loo magacaabay TunesGo Wondershare (Windows) ama TunesGo (Mac) .
Fiiro Gaar ah: Iyada oo version Windows ah, aad u hagaagsan karo files dheeraad ah oo ay ka mid yihiin xiriirada, iyo SMS badan oo aad samayn la version Mac ah.
Tallaabada 1. Daahfurka software iyo xiriiriyaan iPod
Kaliya aan qaadan version Windows sida isku day ah, marka version Mac u shaqeeyo si la mid ah. Ku rakib iyo abuurtaan software this kombiyuutarka. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPod in kombiyuutarka. Software Tani dhakhsaha badan iskaan doonaa iPod oo tus in uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. nidaameed iPod la computer
Files nidaameed ka computer si iPod la waayi maayo
Tiirka ka tagay, sida aad ka arki, waxaa jira dad badan isha. Guji mid ka mid tab iyo aad ka heli doonto suuqa kala dhiganta.
By gujinaya Media , aad u hagaagsan kartaa music, filimada, podcast, Lugood U, audiobook iyo music video aad iPod.
By gujinaya playlist , aad u hagaagsan karaa playlists ka computer ama Lugood in iPod ah.
Click Photos si hagaagsan sawiro si aad iPod.
Click Xiriirada si hagaagsan xiriirada ka vCard a / Muuqaalka / Muuqaalka / Windows Cinwaanka Book / Windows Live Mail in aad iPod.
Nidaameed iPod gudbiyo si computer
Habka ugu fudud ee u hagaagsan music iyo audio dheeraad ah iyo video in Lugood iyo computer waa in aad isticmaasho fure toobiye ah - iDevice Copy in Lugood iyo dhoofinta Music si gal .
Hagaagsan audio & video in Lugood, guji iDevice Copy in Lugood > Start > sax aad files doonayo> nuqul Lugood
music nidaameed in computer: Riix dhoofinta Music si gal .
Hagaagsan files on iPod in computer sidan:
Kaalay dib ugu column ka tagay. Siday u kala horreeyaan guji tabs ah. Markaas, furmo maamulka, lagu eego faylalka la doortay, oo u dhoofin.
> Resource > Lugood > Sida loo xaliyo markii iPod ma hagaagsan doonaa files leh Lugood?